China 4 ikholamu umzobo nzulu cinezela ngesanti kubunzulu baphantsi mveliso kunye mveliso Zhengxi
Umzobo nzulu cinezela hydraulic
Powder ukwakha cinezela hydraulic
Umgca wemveliso oluzenzekelayo
Umnyango embossing cinezela hydraulic
Ingqele ekubumbeni cinezela ngesanti kubunzulu baphantsi
Uhambo lweVR Factory
Icandelo le-SMC BMC cinezela ngesanti kubunzulu baphantsi
Ikholamu ye-4 yomzobo onzulu we-hydraulic
Zenzekelayo yeFerrite Magnetic Hydraulic Press
Oluzenzekelayo SMC Imveliso Line SMC umatshini sheet umngundo ...
Umatshini wokushicilela wekholamu ye-4 wekholamu ikakhulu ulungele iinkqubo zephepha lesinyithi ezinje ngokuzolula, ukugoba, ukukrala, ukwenza, ukungabinanto, ukubetha, ukulungiswa, njl njl, kwaye isetyenziselwa ukolula ngokukhawuleza kunye nokwenza isinyithi.
Umatshini wokushicilela uyilelwe ngokudibeneyo H-isakhelo esineyona nkqubo ingqongqo, ukuchaneka okuphezulu, ixesha elide lokuphila kunye nokuthembeka okuphezulu, kwaye isetyenziselwa ukucofa iinxalenye zetsimbi kwaye inokuhlangabezana nemfuno yemveliso kwiishifti ezi-3 / ngosuku.
Uxinzelelo oluphambili lwesilinda
Ukufa kwamandla oMkhosi
Ubukhulu. uxinzelelo lolwelo
Stroke isilinda Stroke
Ukufa kweCushion Stroke
Ubungakanani bomqamelo wokufa
Umgama wokuhamba osebenzayo
80 + 18
Uyilo lomatshini uphela lusebenzisa uyilo olusebenzayo lwecompyuter kunye nohlalutyo olunento encinci. Amandla kunye nokuqina kwezixhobo zilungile, kwaye inkangeleko intle.
Yenziwe ngentsimbi engama-45 # icinywa, icima ubushushu
Ukugaya kakuhle emva kokuqengqeleka
Umphezulu uqengqiwe uze emva koko ubeke i-chrome ukuqinisekisa ubunzima bomphezulu ongaphezulu kwe-HRC48 ~ 55
Sebenzisa umsesane wokutywina uphawu lwenqaku laseJapan
Ukukhokelwa kukufakwa kwesinyithi, ukumelana nokunxiba okuhle, ukuqinisekisa ukusebenza kwesilinda ixesha elide
1.Ukuhlanganiswa kweNkqubo yeServo
Ubume beNkqubo yeServo
Ubomi beqhosha buvavanywa ngokungqongqo, kwaye abonakaliswanga ngokucinezela amaxesha asisigidi.
Iscreen kunye nesiphene somatshini sinceda, chaza imisebenzi yescreen, chaza ii-alamu zomatshini, kwaye uncede abasebenzisi ngokukhawuleza ukuqonda ukusetyenziswa komatshini
Umgca wokufunyanwa komlawuli we-elektroniki uqhutywa ngokuzimeleyo, kunye namandla anamandla okuphazamisa ukuphazamiseka
Ulawulo lwedijithali lwedrive drive kunye nokudityaniswa nedrive
I-busbar capacitor iyonke iphuculwe ngokupheleleyo, kwaye i-capacitor enobuchule bokuziqhelanisa nobushushu ngokubanzi kunye nobomi benkonzo ende iyasetyenziswa, kwaye ubomi bethiyori bonyuswe ngamaxesha ama-4;
Impendulo kwi-50Mpa yi-50ms, uxinzelelo olugqithisileyo yi-1.5kgf, ixesha loxinzelelo loxinzelelo ngama-60ms, kunye nokuhla koxinzelelo yi-0.5kgf.
Uyilo lokulinganisa lwenziwa yisoftware ye-Ansoft, kwaye ukusebenza kwe-electromagnetic kugqwesile; Sebenzisa ukusebenza okuphezulu kweNdFeB, ilahleko yentsimbi incinci, ukusebenza kwayo kuphezulu, kwaye ubushushu buncinci
3.Izibonelelo zeNkqubo yeServo
Xa kuthelekiswa nenkqubo yemveli yempompo eguquguqukayo, inkqubo yeempompo zeoyile ye-servo idibanisa ukukhawulezisa okungxamisekileyo kweempawu zesantya se-servo motor kunye neempawu zokulawula uxinzelelo lweoyile lwempompo yeoyile ye-hydraulic, ethi izise amandla amakhulu okonga amandla, kunye namandla inqanaba lokonga linokufikelela kwi-30% -80%.
Isantya sokuphendula siyakhawuleza kwaye ixesha lokuphendula lifutshane njenge-20ms, ephucula isantya sokuphendula kwenkqubo ye-hydraulic.
Isantya sempendulo ekhawulezayo siqinisekisa ukuvulwa nokuvalwa kokuchaneka, ukuchaneka kwendawo kunokufikelela kwi-0.1mm, kunye nokuchongwa kokuma kwendawo ekhethekileyo kunokufikelela ± 0.01mm.
Ukuchaneka okuphezulu, ukuphendula okuphezulu kwimodyuli ye-algorithm kuqinisekisa uxinzelelo lwenkqubo ezinzileyo kunye noxinzelelo lweenguqu ezingaphantsi ± 0.5 bar, ukuphucula umgangatho wemveliso.
Ingxolo: Umndilili wengxolo yenkqubo ye-hydraulic servo yi-15-20 dB isezantsi kunempompo yoqobo eyahlukileyo.
Ubushushu: Emva kokuba inkqubo ye-servo isetyenzisiwe, iqondo lobushushu leoyile ye-hydraulic iyancitshiswa iyonke, eyonyusa ubomi besitywina se-hydraulic okanye inciphise amandla apholileyo.
Ifoto-yoMbane yoKhuseleko kuQela ngaphambili nangasemva
Ukutshixa iSilayidi kwi-TDC
UkuSebenza kweSandla esiBini
Isanti Circuit Inkxaso Insurance
Ukukhuselwa ngaphezulu: IValve yoKhuseleko
Inqanaba loTywala Alarm: Inqanaba leoyile
Ubushushu ngeoyile Isilumkiso
Icandelo ngalinye lombane linomthwalo omkhulu wokukhusela
Amantongomane okutshixa abonelelwa ngamacandelo ashukumayo
Yonke intshukumo yeendaba ine-interlock interlock function, umz. Izinto ezinokususwa ezinokusebenza azizukusebenza ngaphandle kokuba umqamelo ubuyele kwindawo yokuqala. Isilayidi asinakucinezela xa kusetyenzwa kusetyenziswana kucofa. Xa kusenzeka ungquzulwano, isivusi sibonisa kwiscreen sokuchukumisa kwaye sibonise ukuba yintoni le ingxabano.
Inkqubo ye-hydraulic yamkela inkqubo ehlanganisiweyo yolawulo lwevalveji ngesantya sokuphendula ngokukhawuleza kunye nokusebenza ngokuhambisa okuphezulu.
Itanki yeoyile ixhotyiswe ngesihluzi somoya ukunxibelelana ngaphandle ukuqinisekisa ukuba i-oyile ye-hydraulic ayingcolisekanga.
4.Udibaniso phakathi kwesivali sokugcwalisa kunye netanki lamafutha lisebenzisa ukudibana okuguqukayo ukuthintela ukungcangcazela ekubeni kungadluliselwa kwitanki lamafutha nokusombulula ngokupheleleyo ingxaki yokuvuza kweoyile.
Egqithileyo Ityuwa block hydraulic cinezela
Okulandelayo: H isakhelo sesinyithi umzobo onzulu we-hydraulic
Inkqubo yolawulo ngamanzi
Inkqubo yolawulo lombane
Ombane Low zombane
Inzwa yokufuduswa (ukhetho)
H isakhelo sesinyithi umzobo onzulu we-hydraulic
Inkampani igubungela indawo yeemitha zesikwere ezingama-45,608, kubandakanya indawo yokusebenzela enzima yeemitha zesikwere ezingama-30,400. Ingcali enkulu [...]